Ukuthanda isitayela kumholele ekuqaleni ibhizinisi eliwusizo kwabathanda izinto ezihlukile njengaye. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UMnu uNhlanhla Mthethwa, umsunguli we-Indwangu Originals,eyenza amasokosi namateki adle ngemibala egqamile yaseDaveyton, eGoli, eGauteng
Ukuthanda isitayela kumholele ekuqaleni ibhizinisi eliwusizo kwabathanda izinto ezihlukile njengaye. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
UKHULELE elokishini futhi uwumuntu okhonze isitayela nothanda ukugqoka izimpahla ehlukile nengandile kubantu abaningi.
UMnu uNhlanhla Mthethwa, waseDaveyton, eGoli, uwumsunguli we-Indwangu Originals, inkampani eyenza amasokisi namateki agqize ngemibala egqamile nenziwa ngendlela okwenziwa ngayo abizayo.
UMnu uMthethwa, oneziqu ze-Economics and Econometrics azithola e-University of Johannesburg ngo-2010, uthi okwenze wasungula Indwangu Originals wukufuna ukuba wusizo kubantu abathanda isitayela njengaye kodwa abangenawo amandla okuthenga izimpahla ezibizayo nabazithandayo. “Yingakho ngafikelwa wumcabango webhizinisini elinjena ngoba ngifuna ukubenzela amateki aqinile nakhiwe ngendlela abayithandayoc namasokisi asesitayeleni ahambisana nawo (la mateki) nenziwe ngezinga eliphezulu.
Amasokisi adle ngemibala egqamile e-Indwangu Originals
“Indwangu Originals ngiyiqale ngo-2014 ngithenga othayi namasokisi eChina Mall eGoli, ngikupende ngemibala ekhangayo nangendlela abantu abathanda isiyatela abayithandayo bese ngibadayisela ngamanani (angabizi),” kulanda yena.
Uthi eqala ibhizinisi ubenabalingani ababili, okuthe ngokuqhubeka kwesikhathi bamshiya ebhizinisini. Uthi uyibambe ishisa injalo waze wagcina esezenzela amasokisi, wathola nabantu abamenzela amateki ngendlela ayifunayo.
“Kube nzima kakhulu ngisaqala, ikakhulukazi ngenkathi sengisele ngedwa ebhizinisini kangangokuthi iminyaka emibili yonke ibhizinisi belingenzi nzuzo, (laze laqala) ukusimama ngo-2017.
“Kuthe ngo-2019 ngaqala ukwenza amateki ngilekelewa yinsizwa yaseFrance neyaseSwitzerland ezinamava kulo msebenzi. Uma umsebenzi umningi ngisebenzisana nabanye ukuze kusheshe,” kusho uMthethwa.
Indwangu Originals yenza namateki abesilisa nabesifazane
UMthethwa uthi akawukhaleli uR3 000 aqala ngawo leli bhizinisi njengoba manje esenamakhasimende eThekwini, eKapa, eGhana, eMelika, eSwatini naseBotswana.
Amasokisi abo aqala kuR129 kuya phezulu, kuthi amateki wona aqala kuR1 000 kuya phezulu, kanti aseyatholakala naseYDE Stores ezweni lonke. “Kusekuncane kakhulu loku uma ngikuqhathanisa nengisafisa ukukufeza ebhizinisini, okungakho leyo naleyo mali engiyitholayo ngiyitshala kulona ukuze likhule kakhulu kuneliyikhona manje. Ngifuna nokuthi Indwangu Originals iqhubeke nokuheha amakhasimende umhlaba wonke futhi ngizimisele ukusebenzisana nezinye izinkampani ukuze ngisimame kakhulu kwezamabhizinisi,” kuphetha uMthethwa.
Facebook: Indwangu Originals/Nhlanhla Mthethwa
Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noYenziwe Sithole, owumlingisi. Useke walingisa emidlalweni esingabala kuyona i-Nandi The Musical, Kungenxa Yokufa, Buchitheka Bugayiwe, Imbewu ne-Durban Gen
IKHOMISHINI yokuNcintisana iphasise ukuthi iHIS Holding Limited ithenge ama-tower awu-5 713 kwiMTN SA. Lezi zinkampani sezizoba yizimbangi njengoba kukhona ama-tower engawadayisanga iMTN SA. Imibandela ebekwe yikhomishini ithi iMTN SA ayivumelekile ukudiliza eminyakeni emibili yokuqala idayisile futhi kumele ithuthukise amabhizinisi amancane ngoR60 million njalo ngonyaka kuze kuphele iminyaka ewu-10. I-IHS kumele ifinyelele kuLevel 4 weBBBEE ezinyangeni eziwu-18, kuthi eminyakeni ewu-4 ibe isikuLevel 1.